Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe After Effects CS6 Soratra
Raha te hampiasa Adobe After Effect CS6 ianao nefa tsy fantatrao hoe aiza no ahazoana azy dia holazaiko anao ny fomba azo antoka sy haingana hampidinana azy.
SORATRA AOKA EFITRA CS6
Fanaraha-maso fakan-tsary 3D . After Effects CS6 dia manana fiasa vaovao vaovao manan-danja - mpanara-maso fakan-tsary 3D izay tena ilaina amin'ny mpamorona sary mihetsika ihany koa. Raha tokony hanara-maso zavatra iray amin'ny horonan-tsary voarakitra dia ny Tracker Camera 3D no manara-maso ny isan'ny zavatra ary mamerina manangana ny toeran'ny fakantsary. Aorian'izany dia afaka manamboatra sosona fakantsary mety izy ary mametaka takelaka 3D vaovao amin'ny fandrindrana mifanaraka amin'ny zavatra sy ny habakabaka hita eo amin'ny sehatry ny loharano.
Amin'ity endri-javatra ity dia azonao atao ny manafatra rakitra fisie AI sy EPS miaraka amin'ny logo, sary ary endrika, avy eo avadiho ho toy ny sosona izay azonao amboarina. Azonao atao ny mifehy ny loko feno sy kapoka, manova endrika, mampiasa mpandraharaha endrika, toy ny Wiggle Paths ary ny Wiggle Transform.
Fitaovana Aorian'ny effets alternatives. Sintomy ny Adobe After Effects CS6 ary afaka mampiasa an'io endri-javatra io koa ianao. Ankehitriny, azonao atao ny manova làlana tokana mba hampifanarahana ny endrika sisiny mafy sy malefaka, ohatra, ny fihetsehana manjavozavo amin'ny zavatra mihetsika. Miaraka amin'ity fitaovana ity, azonao atao ihany koa ny manondro isa tsirairay amin'ny fandaharam-potoana ary manamboatra azy ireo amin'ny alàlan'ny zavatra misaron-tava.
Fahafahana misimisy kokoa hiasana amin'ny sary DSLR. After Effects CS6 dia manana ny vokany vaovao amin'ny Rolling Shutter. Afaka mamakafaka ilay horonantsary sy manamboatra azy io. Ny asany dia mifototra amin'ny algorithma roa azo safidin'ny mpampiasa, Warp na Pixel Motion, ary koa torolàlana fitiliana. Voafantina izy ireo arakaraka ny zoro ny fakan-tsary izay nitifirana ilay horonan-tsary.
Be dia be ny nanorina-in vokany. Ity rindrambaiko ity dia manolotra effets built-in vaovao maherin'ny 80, ao anatin'izany ny CycoreFX HD Suite izay manohana loko 16-bit-per-fantsona. Ny vokatra 35 natolotry ny After Effects CS6 dia manohana ny fanodinana teboka 32-bit.
Maimaimpoana aorian'ny effets Scripts
Vokariny vaovao izay tsy nifandray tamin'ny After Effects taloha. Ireo vokatra ireo dia misy ny Cross Blur, Color Neutrizerizer, Kernel, Threads, Tontolo iainana, Rotsakorana, Snowfall, Block Load, Plastika, Line Sweep, WrapoMatic ary Overbrights. Ny fanatsarana sasany koa dia natao, ao anatin'izany ny fanohanana ny blur mihetsika sy ny jiro 3D an'ny singa amin'ny vokatra CycoreFX manan-danja.
Rafitra fikirakirana Windows: Microsoft Windows 7 miaraka amin'ny Service Pack 1, Windows 8 ary Windows 8.1. Jereo ny FAQ CS6 raha mila fanazavana fanampiny momba ny fanohanan'ny Windows 8. Mac OS: macOS v10.6.8, v10.7, v10.8, na v10.9
ram 8 GB farafahakeliny (16 GB atoro anao)
Karatra sary 2GB an'ny GPU VRAM
Hard disk habaka 5GB misy habaka kapila misy
SORATRA HO WIN
After Effects dia fitaovana matihanina amin'ny famoronana vokatra manokana izay mitaky fanamarinana matotra avy amin'ny solosainao satria avo be ny enta-mavesatra ao aminy. Ho an'ny fampidinana Adobe After Effects CS6, mila solosaina iray ianao amin'ny lafiny iray lafo na lalao iray. Raha mampiasa solosaina malemy ianao hiasa, hiasa miserana ny programa na hijanona eo afovoan'ny fizotrany.
Alohan'ny hiasa amin'ny vokatra manokana dia mila manitsy ny lokon'ny kalitao ianao. Aleoko manao izany amin'ny LUTs. Amin'izany dia ho vitanao amin'ny tsindry roa izany. Sintomy ny gropy LUTs maimaim-poana ho an'ny fanoratana loko.
Fonosana LUTs maimaim-poana
Fampidinana Adobe After Effects CS6
Sintomy aorian'ny vokany maimaim-poana